केकी अधिकारी भन्छिन्ः गर्भवती भएझैं महसुस भएको छ - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
फिल्मले दिएको व्यस्ततालाई हेरेर केकी आफैले फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘यति धेरै टेन्सन छ त्यही पनि म किन बेहोस हुन्न?’
फिल्म निर्माणको अुनभवबारे केकीसँगकाे अन्तर्वाता आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
के केकीलाई यतिबेला बेकारमा फिल्म बनाउन हतारिएछु भन्ने लागेको छ?
बेकारमै फिल्म बनाउन तम्सिएँ भन्ने त लागेको छैन। संसारकै गाह्रो काममा हात हालिएछ भन्नेचाहिँ लागेको छ।
के–के चिज गाह्रो हुँदाेरहेछ त?
फिल्म निर्माणकै दुइटा चरण हुन्छन्, सुटिङअघि र सुटिङपछि। सुटिङअघि आर्थिक पाटोमा हल्का टेन्सन हो, अनि अलि-अलि कास्टिङमा झन्झट हुँदाेरहेछ। तर सुटिङपछि चाहिँ राम्रो काम निकाल्नलाई अलि धेरै अप्ठेरो हुँदाेरहेछ। -
तपाईँ आफै ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ, पढेको काम लागेन त?
खासै लागेन भन्नुपर्ला। सिद्धान्तका कुरा र व्यवहारका कुरा फरक परिहाल्छ नि। अझ त्यसमाथि हामी त्यति धेरै व्यासायिक हिसाबले पनि त काम गर्दैनौं नि। म पाँच महिनादेखि यही फिल्मकै लागि खटिइरहेकी छु। अरू कुनै प्रोजेक्ट नगरी लामो समय बसेको यो पहिलोपटक हो। मलाई त गर्भवती भएझैं महसुस भएको छ। मानौं ५ महिनाको बच्चा बोकेर हिँडिरहेकी छु।
फिल्मको कुरा गरौं, धेरैले केकीलाई बौद्धिक अभिनेत्रीका रूपमा चिन्छन्। तर केकीले फिल्म निर्माण गर्दा कमेडी जस्तो हल्का विषय छान्यो भनिरहेका छन्। किन यो विधामा फिल्म?
हो मैले बलेकै आगो ताप्न खोजेकी हुँ। यसका पछाडि दुइटा कारण छन्, पहिलो त निर्माता बन्ने निर्णय गरेर म आफैले एक खालको रिस्क लिएँ, किनकि छँदाखाँदाको अभिनय करिअर छाडेर म फिल्म बनाउन आएकी हुँ।
प्रकाशित १० बैशाख २०७५, सोमबार | 2018-04-23 08:32:17